Ancelotti oo iska fogeeyay in kooxdiisu ay la soo wareegayso Bastian Schweinsteiger – Gool FM
(Munich) 03 Agoosto 2016 Tababaraha kooxda Bayern Munich Carlo Ancelotti ayaa iska fogeeyay in kooxdiisu ay la soo wareegayso laacibka Man United ee Bastian Schweinsteiger.
Ancelotti ayaa sheegay in saxiixa Bastian Schweinsteiger uusan ku jirin qorshaha kooxdiisa Bayern Munich laakiin wuxuu ku amaanay inuu ahaa laacib fiican oo horay u soo maray kooxda reer Jarmal.
Kabtanka Bayern ee Lahm ayaa horay u sheegay in kooxdiisu ay soo dhawayn doonto dib u soo laabashada Schweinsteiger, wixii ka danbeeyay waqtigaas saxaafada ayaa aad ula xiriirisay inuu dib ugu laabanayo gurigiisii hore.
Balse tababare Ancelotti oo aan la dhacsanayn fikirkaas ayaa yiri:
“Saxiixa Schweinsteiger kama mid ahan qorshaheena, laacib cajiib ah ayuu ka ahaa Bayern Munich iyo waliba kubadda cagta, laakiin waxaan rumaysanahay in waqtigaan uusan ahayn kii uu dib ugu soo laaban lahaa Bayern”.
"Inter Milan way awoodaa inay la tartanto Juventus" - Massimo Moratti
Conte oo albaabka ka xirtay Milan iyo Juventus: Cuadrado waa laacib ka tirsan Chelsea"